Disney Epic Quest 0.0.12 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.0.12 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ Disney Epic Quest
Disney Epic Quest ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Syntax အမည်ရှိဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြီးမားပရမ်းပတာဖြစ်စေ, ဒစ်ဂျစ်တယ်နိုင်ငံကူးစက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာနောက်ကျောကိုတိုက်ဖို့အချိန်ပဲ! ရောဂါကူးစက်မှုကိုတိုက်ဖျက်နှင့် Syntax ရပ်တန့်ဖို့ Cryption သော့ချက်များ retrieve မှ Disney နဲ့ Pixar ဇာတ်ကောင် a.k.a လငျးအိမျ၏ကစားသမားစည်းဝေး!
MULTIPLE University မှ Disney နဲ့ Pixar အက္ခရာ Starring
- ကာရစ်ဘီယံ, ဖျက်ဆီး-ဒါဟာ Ralph က The Incredible ... အများသောပို Pirates လာရန်, Mickey Mouse & မိတ်ဆွေများ, Big သူရဲကောင်း6ကနေအကျွမ်းတဝင်မျက်နှာများတွေ့ဆုံ။
- ဒစ်ဂျစ်တယ်နိုငျငံတျော၌ကူးစက် Pixels တိုက်ဖျက်ဖို့သင့်ရဲ့ကစားသမားသို့သူတို့ကိုငါထမ်းခေါ်ယူမှု!
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ SOLO OR တွင် TEAM တက်သွား
- Co-op သို့မဟုတ်ထိပ်တိုက်တွေ့ mode မှာရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူဖို့စစ်မှန်သောဘဝမိတ်ဆွေများကိုစုဝေးစေ
- အတူတူကစားရန်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်အတူလိုက်ဖက် Get
်ထမ်းခေါ်ယူမှု, သင့်ကစားသမားကို upgrade & customize
- Disney နဲ့ Pixar ဇာတ်ကောင်စုဆောင်းဖို့ဒေတာများကိုစုဆောင်း
- ဖြည့်စွတ်အတန်းသုံးခုဇာတ်ကောင် (ခွန်အား / မြန်နှုန်း / ဉာဏျပညာ / ဟန်ချက်ညီ) နဲ့မဟာဗျူဟာကစားသမားဖွဲ့စည်း
- တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်ကောင်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဂီယာ Upgrade
- အရေခွံနှင့်သင်၏ဇာတ်ကောင် Customize
ထိပ်တိုက်တွေ့ MODE ရှိကူးစက်မှုအက္ခရာဆန့်ကျင် OFF ရငျဆိုငျ
- တိုက်ပွဲထိုကဲ့သို့သော Little ကရာဘုရင် Candy နှင့်ပိုပြီးအဖြစ် Disney နဲ့ Pixar ဇာတ်ကောင်ကူးစက်
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/DisneyEpicQuest/
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: https://gogame.net/terms-of-services
Disney Epic Quest အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Disney Epic Quest အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Disney Epic Quest အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
ambushbug စတိုး22.17k
Disney Epic Quest ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Disney Epic Quest အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 0.0.12
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://gogame.net/privacy-policy
လက်မှတ် SHA1: B5:87:56:45:4B:14:88:FB:27:28:A4:2E:57:4F:B7:90:7B:6C:C3:1C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): PIXL
အဖွဲ့အစည်း (O): Go Game Pte. Ltd.
Disney Epic Quest APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ